भरतमोहनभन्दा अघिल्ला अर्थमन्त्री महेश आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा पनि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दबाब रहेको बताए । ‘अहिलेजस्तै सबै पार्टीका सांसद, तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले सांसदलाई बजेट चाहियो भनेर दबाब दिइरहनुभएको थियो, पार्टी कार्यालयमा छलफल पनि भयो,’ उनले भने ।
सबैभन्दा कम प्रदेश ५ ले ८७ सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट ल्याएन । तर आउँदो वर्ष केन्द्रको भन्दा आधा विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब छ । प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:५२
यसमा म दुइटा कुरा गर्छु । पहिलो कुरा त, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्षदेखि नाम चलेका नेताहरूले कुन–कुन बेलामा के–के विचार प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको सिलसिला उतारिदिनुहोस् । नेपाली जनता आजको कुरा भोलि बिर्सिन्छन् । हामी राजनीतिक नेताहरू विषयप्रति कसरी प्रस्तुत हुन्छौं । त्यो ऐनाजस्तो उतारी त दिनुस् । आफैं देखिन्छ ।
पार्टी एकताको एक वर्ष पुग्दा पनि कतिपय काम अझै बाँकी छन् । अहिले भइरहेका गतिविधिले एकतालाई भत्काउँदैन ?
कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न मात्र होइन, जुट्न पनि सक्छौं भनेर एकता गरेको हो । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र सकारात्मक धारणा राख्ने जनताको चाहनाको परिणाममा एकता भएको हो । राष्ट्रिय आवश्यकताको परिणाम पनि हो । राजनीतिक अस्थिरताले हामी
आक्रान्त थियौं । एकताबद्ध त भयौं, तर यो एकताबद्ध पार्टी सुसंगत विचारको शृंखला बोकेको पार्टी हुनुपर्छ ।
विचारमा सुसंगत हुन सकेनौं भने शृंखलाबद्ध कमिटी प्रणाली भएन भने, जनतामा स्थापित, परिचित नेताहरूको पंक्ति विभिन्न कमिटीमा रहेन भने, यो कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो बनाएर मात्र हुँदैन । यसलाई साँच्चै मुलुकको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन मैले अघि भनेका चीजमा ध्यान दिनुपर्छ । एकता प्रक्रिया जसरी अगाडि बढाउन खोज्यौं, त्यसमा सुरुमै अलिकति त्रुटि थिए । हामीले केन्द्रमा एकता गर्‍यौं । त्यसपछि एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रदेश टुंग्याइदिने र तलको नेतृत्वको कुरा त्यही तहबाट प्रस्तावित गर्न लगाउँदा टुंगिन्थ्यो । हामीले सबै कुरा माथि ल्याएर टुंग्याउने अभ्यास गर्‍यौं ।
त्यस्तो चाहना प्रकट गर्ने दुईजना अध्यक्ष हुन् कि सिंगो सचिवालय ?
मलाई तीतो कुरा गर्न त मन छैन । तर हिसाबकिताबबाट चल्ने मानसिकता प्रकट भएको जस्तो देखिन्छ । मान्छेले बाहिर त्यही बुझ्छन् । मैले होइन भनौं भने पनि तपाईँहरू पत्याउनु हुन्न ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा हामीले एक अक्षर पनि थपेको होइन । विगतको सरकारको पालामा रक्षामन्त्रीले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विधेयक संसद्मा पुगेको हो । त्यही चीज जस्ताको त्यस्तै ल्याएको हो । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति हुन्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक सिफारिस नगरी राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुँदैन । प्रधानसेनापतिलाई क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै त सेना परिचालित हुने होइन । अनि यो बिनाबातको कुरालाई बात बनाउने कुरा ठीक छैन । कथंकदाचित औपचारिक रूपमा परिषद्को बैठक नबस्दा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावसम्म मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने मात्र हो । सेनापतिलाई अलग गरेर सेना परिचालन हुँदैन ।
कुनै पनि रिजनल वा ग्लोबल ‘मिलिटरी एलायन्स’ मा नेपाल सामेल हुँदैन । यो स्पष्ट कुरा हो । हामी दुईपक्षीय रूपमा तालिम गर्छौं । चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश अमेरिका, बेलायतसँग यस्तो तालिम चलेका छन् । कहिलेकाहीं संयुक्त तालिम पनि हुन्छन् । त्यसमा सहभागी हुन्छौं । तर कुनै एलायन्समा भने सामेल हुँदैनौं ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:२४